Floder တွေဖွင့်ရတာ ကြာနေရင်
WindowsXPမှာ Folderတွေ ဖွင့်တဲ့အခါ တစ်ခါတစ်လေ ကြာနေတတ်ပါတယ်။ မြန်ဆန်အောင် လုပ်တဲ့နည်းလေးပဲ ပြောပြလိုက်ပါမယ်။ Windows Xpသုံးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေ လွယ်ကူစေအောင်ပါ။ လုပ်နည်းလေးကတော့
1. My Computer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
2. Menu bar မှာပါတဲပ Tools ကို Click လိုက်ပါ။
3. Folder option ကို Click လိုက်ပါ။
4. Folder optionထဲက View tab ကိုဝင်လိုက်ပါ။
5. View ထဲက Automatically search for network folders and printers ကိုအမှန်ခြစ်လေး ဖြူတ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Apply >> OK ပေါ့။
ဒါဆိုရင်တော့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ folder လေးတွေ ဖွင်တဲ့အခါမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပွင့်လာမှာတော့ သေချာပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
1. Run Box မှ Regedit လို့ရိုက်ပြီး Registry ထဲရောက်အောင် သွားလိုက်ပါ။
2. Registry ထဲရောက်ရင် HKEY_LOCAL_MACHINE> System > CurrentControlSet > Control >Filesystem ထဲရောက်အောင် သွားလိုက်ပါ။
3. Filesystem ကိုရောက်ရင် Right Click ထောက်ပြီး New ကနေ DWORD Value အသစ်တစ်ခု တည်ဆောက်လိုက်ပါ။ မရှင်းရင် ပုံလေးကို ကြည့်ပေးပါ။
4. ညာဘက်မှာ New Value ဆိုပြီး အသစ်တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပေါ်လာတဲ့ New Value #1 နေရာမှာ NtfsDisableLastAccessUpdate လို့အတိအကျ Rename ပေးလိုက်ပါ။
5. Rename ပေးထားတဲ့ နေရာလေးကို Double Click နှိပ်လိုက်ရင် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ဖို့ Box လေးတစ်ခု ထပ်ကျလာပါလိမ့်မယ်။ Value ကို0ကနေ 1 ဆိုပြီး ပြောင်းပြီး သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် OK ပေါ့။